Tobak och graviditet - somaliska - 1177
Tobak och graviditet - somaliska
Tubaako iyo uur
Tobak och graviditet - somaliskaThe content concerns Jönköpings län
Canuga caloosha ku jiro maadooyin wasaq leh baa gaari haddii adiga sigaar cabtid ama tubaako isticmaashid marka aad uurka leedahay. Taas waxey halis u tahay canuga iyo uurka. Sida ugu dhaqsaha badan oo ku joojisid isticmaalka tubaakada waxaa nusqaami halista. Dhammaan dadka weey iska joojinkaran isticmaalka tubaakada. Adiga waxaa helikarta caawinaad haddii ey kugu adagtahay. Laakin iska ilaali sharootada nikotiinka, xanjada nikotiinka iyo sigaarka elektroniiga[e-cigaretter].
Haddii aad dooneysid inaa uur yeelatid waa in adiga iska deysaa tubaakada ama marka aad ka warheshid inaa uur leedahay. Markas kadib iska deey sigaar cabid, tubaako ama tubaakada la ruugo inta aad uurka leedahay oo dhan. Haddii aad nusqaamisid tubaakada canuga caloosha ku jiro gaareyso, aad bey u fiicantahay.
Maxaa aniga suubsankara? - Vad kan jag göra själv?
Qofkasto wuu joojinkara sigaar cabida ama tubaako isticmaalida. Waxaa jiro farsamo kala duwan oo adiga kuu fududeyn. Tan ugu muhiimsan waa in adiga dooneysid inaa joojisid. Ku fikir qofka inta uu dareemi xaraarada nikotiinka caadiyan wa dhowr minid.
Xilliga ey badanaa ugu fududahay in laga iska daayo sigaarka iyo tubaakada waa qofka markuu uurka leeyahay. Adiga waxaa dhiirogalin kuu noqonkaro inaa canuga caafimaad la dooneysid. Uurka wuxuu sabab u noqonkara in tubaakada aad ku labolabootid ama iska dhibsatid.
Siduu noqon jirka? - Vad händer i kroppen?
Tubaakada waa sida mukhaadaraadka camal oo waxaa ku jirto maadooyin jirka dhaawaci.
Maadooyinka oo tubaakada ku jiro inta ugu badan waxey u gudbaayan canuga. Canuga inta galeyso weey ka badan inta adiga ku galeyso, qaas ahaan maadooyinka la dhaho kolmonoxid iyo nikotin. Maadooyinka qaarkood oo tubaakada ku jiro waxey badin halista oo in waxyaabo kala duwan uurka kala kulantid.
Canuga wuxuu qaadan kolmonoxid
Qiica sigaarka waxaa ku jiro qiic sun ah oo la dhaho kolmonoxid. Qiicas wuxuu sabab u noqon in dhiiga jirkaada sida loogu talagalay u qaadaneyn hawada. Adiga iyo canuga qiica kolmonoxidka dhiigiina buu gali haddii adiga uur leh aad sigaar cabtid. Dhiiga canuga waxaa gaari labolaab oo qiica kolmonoxid haddii adiga lagu la bardhigo. Suntas aad bey ugu daahi canuga.
Nikotinka waxey saameyn inta canuga la ekaandoono
Nikotinka weey ku jirta dhammaan tubaakada oo dhan. Nikotinka waxey sabab u noqon dhiiga maraayo makaanka iyo xubinta canuga ku dhex jiro uusan si fiican u marin. Markasna canuga ma helaayo hawo iyo nafaqo ku filan. Canuga sifiican ma u koraayo iyo miisaankiis wuu yaran oo aad buu uga miisan yaran miisankii uu caadiyan ku dhallan lahaa. Taasna waxaa lagu magacaaba in canuga laga xajiray koriinkii.
Marka aad tubaakada la ruugo ama daanka la gashto isticmaashid jirkaada wuxuu qaadan isku nikotin oo sidii inaa siggaar cabtay camal, ama ka badan.
Shiishada iyo siggarka elektroniiga - Vattenpipa och e-cigaretter
Shiishada waxaa ku jiro nikotin, kolmonoxid iyo qiicyo kale oo sun ah. Adiga ha isku cabin shiishad haddii aad uur leedahay.
Siggarka elektroniiga waxaa iibsankarta mid aan laheen nikotin. Laakin wax warbixin ma laga haayo sida maadooyinka kale oo ku jiro siggarka elektroniiga u saameynaayan canuga caloosha ku jiro. Sidaas daraadeed iska ilaa siggarka elektroniiga inta aad uurka leedahay. Siggarka elektroniiga waxaa xita loogu magacaaba E-cigarett. Cabtida siggaarka elektroniiga waxaa lagu magacaaba in qofka uu vejpa suubin.
Dhibaatooyinka - Komplikationer
Halista oo inuu canuga korin waxaa jiro halisyo kale haddii adigoo uur leh aad siggar cabtid la kulmeysid:
foosha wakhtigeeda bey wax badan ka soo hormari.
xubinta canuga ku jiro wuxuu makaanka ka soo fuqi wakhtigii loogu talagalay ka hore.
adiga waxaa ku sugantahay halis in canuga kaa soo dhaco ama caloosa ku dhinto.
canuga waxaa ku badaneyso halista inuu marka aad dhashid kadib si kadis ahaan u dhinto.
Cilmi baaritaano badan ma laga haayo tubaakada la ruugo iyo uurka. Laakin waxaa la ogyahay in haddii tubaako ruugtid badaneyso halista inuu canuga koridoonin. Waxaa halis ah in canuga ku dhimankaro caloosa.
Waa muhiim inaa mustaqbal ahaan u fikirtid - Viktigast att tänka framåt
Haddii aad tubaako isticmaashay inta aad uurka laheed waxaa suurtagal inaa ku murugootid arrintas. Waxaa suurtagal ah in adiga aadan ka warhayn inaa uur laheed. Waxaa suurtagal noqonkaro inaa iska deyn weysay. Waa caadiyan qofka inuu dareemo ceeb iyo dambi.
Markas camal waxaa wanaagsan qofka inuu mustaqbalka ku fikiro. Isku mashquuli sidaa suubin laheed siduu canuga tubaako kale uga nabadgalo.
Goormee baa aniga soo raadsan daryeel? - När ska jag söka vård?
La soo xiriir ummulisada haddii aad siggar ama tubaakada la ruugo isticmaashida iyo adiga gacantaada iska deynkarin. Ayaga baa ku siin talo oo sida aad iska deynkartid tubaakada.
Waxaa xita la soo xiriirikarta ruugta caafimaad[vårdcentral]. Meeshas waxaa joogo kaalkaalisooyin oo aqoon qaas uleh sida dadka looga caawiyo joojinta isticmaalida tubaakada.
Soo wac telefoon lambarka 1177 haddii adiga ubaahantahay in warbixin lagaa siiyo meesha aad daryeelkas u raadsaneysid.
Daryeel - Behandling
Ma jiro wax daawo oo la ansaxiyay in qofka daryeel ahaan loo siiyo oo looga caawin qofka uurka leh tabitaanka nikotiinka.
Waxaa wanaagsan adiga inaa la hadashid dhakhtar haddii aad u baahantahay inaa isticmaashid daawada nikotiinka marka aad uurka leedahay ama naas-nuujin.
Dad badan oo iska joojin isticmaalida tubaakada waxey isticmaalan xanjada nikotiinka la ruugo ama sharootada nikotiinka. Waxey nusqaamin tabitaanka. Laakiin xanjada nikotiinka iyo sharootada nikotiinka waxey dhaawaci canuga. Sharootada ayaa ka sii dhaawac badan xanjada.
Qadka telefoonka joojinta siggar cabbitada
Adiga waxaa soo wicikarta Qadka telefoonka joojinta siggar cabbitada[Sluta röka-linjen] iyo meeshas baa ka heli caawinaad. Telefoon lambarkooda waa 020-84 00 00. Waa bilaash in la soo waco Qadka telefoonka joojinta siggar cabbitada.